Maxaa xiligan ka hadal-siiyay gudiga xalinta khilaafka DF iyo D/goboleedyada • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Federal Republic of Somalia / Maxaa xiligan ka hadal-siiyay gudiga xalinta khilaafka DF iyo D/goboleedyada
Maxaa xiligan ka hadal-siiyay gudiga xalinta khilaafka DF iyo D/goboleedyada
November 27, 2018 - By: Abdirisak Faamoos
Waxaa magaalada Muqdisho maanta kulan ku yeeshay gudigii loo xilsaaray xalinta khilaafa dowlada federaalka iyo maamul goboleedyada.
Gudiga ayaa isla Maanta soo saaray 8 qodob oo ah tabashooyin ay qabaan maamul Goboleedyada iyo 4 qodob oo mid walbiba sigaar ah ay u dooneyso in looga xaliyo kuwaasoo kamid ah qodobadii ay isku hayeen dowlada iyo dowlad goboleedyada.
Senetar Cabdiraxmaan Maxamed Maxamuud Faroole madaxweynihii hore ee Puntland ahna gudoomiyaha Gudiga loo xil saaray soo Afjaridda Khilaafka dowladda dhexe iyo maamul goboleedyadda ayaa sheegay in la dhameeyay khilaafkii Dowladda iyo Dowlad Goboleedyada.
Dr Faroole ayaa sheegay in qodobada aan wali la helin xalkooda ee haray dhawaan la dhameystiri doono,isla markaana dowladda federaalka looga baahan yahay inay masuuliyaddeeda qaadato.
Maamulka Jubaland oo dhankooda ka hadlay warka kasoo baxay gudiga xalinta khilaafka dowlada federaalka iyo maamul goboleedya ayaa soo dhaweeyay baaqa aqalka sare waxaana wasiir dowlaha madaxtooyada Jubaland oo warbaahinta la hadlay uu sheegay in loo baahan yahay in dowlada federaalka ay fuliso qodobada laga soo saaray shirka gudiga aqalka sare.
Si kastaba dad badan ayaa isweydiinaya waxa xiligan ay gudiga xalinta khilaafka dowlada iyo dowlad goboleedyada ay u soo saareen warkan la xiriira in la dhameeyay inta badan khilaafkii dowlada federaalka iyo maamul goboleedyada maadama aanay gudiga ku guuleysan in ay isku soo dhaweeyaan labada dhinac ee isku haya siyaasada.
Dad kale ayaa aaminsan in wakhti munaasab ah aanay gudigu soo saarin warkan la xiriira in ay guul ka gaareen xalinta tabashadii jirtay xili la sheegayo in xeero iyo fandhaal ay kala dhaceen oo ay dowlada federaalku libin ka sheegatay dagaal siyaasadeedkii ay la gashay maamul goboleedyada maadama ay meesha ka saartay golihii iskaashiga iyo gudoomiyahoodii.